Muranka badda: Kenyatta oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go’aanka maxkamadda ICJ | Biyoguurenews.com
Home Wararka Muranka badda: Kenyatta oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go’aanka maxkamadda...
Muranka badda: Kenyatta oo ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go’aanka maxkamadda ICJ
Madaxweynaha waddanka Kenya, ayaa markale gaashaanka u daruuray xukunka Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda oo dhawaan Soomaaliya u xukuntay qeyb badan oo ka mid ah soohdinta badda ay ku mursanaayeen Kenya iyo Soomaaliya.
Uhuru Kenyatta, ayaa ka digay in go’aankaasi uu waxyeelayn kara xiriirka ka dhaxeeya labada dal.
Madaxweynaha Kenya waxa uu gebi ahaanba ku gacanseyray xukunka ay maxkamadda ka soo saartay muranka baddan oo la sheegay inay ceegaagaan yihiin gaaska iyo kheyraad kale oo dabiici ah isagoo sheegay in arrintaasi ay “isbaddel wayn ku keeni doonto horumarka dhaqaale iyo midka siyaasadeedba ee dalkiisa, ayna halis gelin karta ammaanka gobolka Geeska Afrika.”
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta
Kenyatta ayaa hadalkan ka jeediyay xafladda dabbaaledegga maalinta halyeeyada oo ku beegneyd shalay.
”20 -ka Oktoobar waa maalin muhiim u ah taariikhdeena maxaa yeelay 1952 waxay ahayd maalintii Xaaladda Degdegga ah uu gumaystuhu kaga dhawaaqay dhulkeenna, waxaana la xiray boqollaal kamid ah aabayaashii dalka Kenya aas’aasay”.
Madaxweyne Uhuru ayaa sheegay inay dadkii xoriyada Kenya u dagaalamay ay caqabadahaas dusha u riteen sidaas awgeedna ay ka guuleysteen gumeeystaha.”Cidna kama aqbaleyno in ay sheegato lahaanshiyaha qeyb ka mid ah dhulkeena, sida aan u xushmeyno xuduuddaha dalalka kale ayaan sidoo kale ka filaynaa in xuduuddaheen dhuleed iyo badeed loo xushmeeyo,” ayuu yiri madaxweyne Kenyatta.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta
Bishii sagaalad ee sanadkan ayuu Madaxweyne dalka Kenya Uhuru Kenyatta booqday Lamu halkaasi oo uu xarigga ka jaray saldhig ballaaran oo ay ciidamada badda ku yeelan doonaan Manda Bay oo ka tirsan deegaanka Lamu .
Wuxuu kaloo xarigga ka jaray garoon diyaaradeed oo uu saldhigaasi Manda yeelan doono.
Madaxwayne Kenyatta oo khudbad jeediyay markii uu saldhigani xarigga ka jaray ayaa sheegay in saldhigani uu muhiim u yahay madaxbanaanida Kenya iyo sugidda ammaanka xuduudaha.
Taliyaha militariga Kenya Janaraal Robert Kibocho ayaa dhankiisa sheegay in saldhigan uu taageero siin doono ciidamada Kenya ee ku sugan Kismaayo.
Ciidamada badda ee dalka Kenya ayaa waxaa muddoyiinkii u dambeeyay ku socday dib u habeyn xooggan.
Dowladda Kenya ayaa maraakiib cusub oo casri ah u soo iibsay ciidamada badda.
Previous articleBERBERA,4 Wasiirka cafimadka oo kormeeray xalada cisbtitaalada berbera
Next articleWar-saxaafadeed:Nuxurka Go’aano ka soo baxay Fadhigii Golaha Wasiirada S/land